ILufthansa Group ibuyisela imali etyalwa urhulumente waseJamani
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » ILufthansa Group ibuyisela imali etyalwa urhulumente waseJamani
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zaseJamani zokuPhula • Iindaba zikaRhulumente • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Tourism • uthutho • Iindaba zeWired Travel
ILufthansa Group ibuyisela imali etyalwa urhulumente waseJamani.
Le ntsasa, iSilent Participation II ye-Economic Stabilization Fund ye-Federal Republic of Germany (ESF) efikelela kwi-1 yebhiliyoni ye-euro ibuyiselwe ngokupheleleyo.
Zonke iimali-mboleko zaseJamani kunye nokuThatha iNxaxheba okuThulileyo, kubandakanywa inzala, ngoku zibuyiswe ngokulandelelana zipheliswe.
Phantsi kwalo mqathango, iESF izimisele ukuthengisa izabelo zayo kwiDeutsche Lufthansa AG exabisa malunga. I-14 yepesenti ye-share capital ngo-Okthobha ka-2023 ngoku.
Iphakeji yorhulumente waseJamani iqale yabonelela ngamanyathelo kunye nemali-mboleko efikelela kwi-9 yeebhiliyoni zee-euro, apho inkampani itsalele phantsi iyonke malunga ne-3.8 yeebhiliyoni zee-euro.
NgoLwesihlanu, iDeutsche Lufthansa AG ibuyise okanye yarhoxisa yonke imali eseleyo yozinziso lukarhulumente evela kwiFederal Republic of Germany. Intlawulo yenziwa kwangoko kakhulu kunokuba bekucetyiwe ekuqaleni. Oku kwenziwe kwaba nokwenzeka ikakhulu ngokunyuka kwemfuno yohambo ngomoya, uhlenga-hlengiso olukhawulezileyo kunye notshintsho lweQela leLufthansa kunye nentembeko yeemalike ezinkulu kwinkampani.
Oku kuthetha ukuba le ntsasa, iNxaxheba yokuThula II yeNgxowa-mali yokuZinzisa uQoqosho ye-Federal Republic of Germany (ESF) efikelela kwi-1 yebhiliyoni ye-euro ibuyiselwe ngokupheleleyo. Emva kokuba inkampani sele ihlawule ngokuThatha iNxaxheba okuthuleyo ngo-Okthobha, apho kwatsalwa i-euro eyi-1.5 yebhiliyoni kuphela, inxalenye engasetyenziswanga neshiyekileyo ngoku nayo iye yapheliswa. NgoFebruwari ophelileyo, inkampani yayisele ibuyisele imali mboleko ye-KfW ye-euro eyi-1 yeebhiliyoni ngaphambi kokuba ilindelwe. Oku kuthetha ukuba zonke iimali-mboleko zaseJamani kunye nokuThatha iNxaxheba okuThulileyo, kubandakanywa inzala, ngoku zibuyiselwe ngokulandelelanayo. Phantsi kwalo mqathango, iESF izimisele ukuthengisa indima yayo Deutsche Lufthansa AG ifikelela kwi approx. I-14 yepesenti ye-share capital ngo-Okthobha ka-2023 ngoku.
UCarsten Spohr, iCEO yeDeutsche Lufthansa AG, uthi:
“Egameni labo bonke abasebenzi baseLufthansa, ndingathanda ukubulela urhulumente waseJamani kunye nabarhafi baseJamani. Kweyona ngxaki inkulu yezemali kwimbali yenkampani yethu, basinike imbono yekamva. Oku kusenze ukuba sigcine imisebenzi engaphezu kwe-100,000. Siyazingca ngokuba sakwazi ukugcina isithembiso sethu kwangethuba kunokuba besilindele kwaye sibuyisele uncedo lwemali lwaseJamani. Ndingathanda ukubulela abasebenzi bethu ngokuzinikela kwabo ngokukodwa abathengi bethu abathe bahlala benyanisekile kuthi kula maxesha anzima. ILufthansa ikwazile ukuthembela kwiJamani kwaye iJamani inokuxhomekeka kuyo Lufthansa. Imingeni mininzi. Umnqweno wethu kukuqinisa isikhundla sethu phakathi kwamaqela aphambili eenqwelomoya kwihlabathi. Ukuza kuthi ga ngoku, siza kuqhubeka ngokuqhubekayo nohlengahlengiso kunye notshintsho kwinkampani.
Remco Steenbergen, CFO we Deutsche Lufthansa AG, uthi:
“Ngaphezu kwako konke, ndingathanda ukubulela abatyali-zimali bethu ngokusithemba kwabo kwinkampani yethu. Ngaphandle kwabo ukuphuma ngokukhawuleza okunje kwiNxaxheba yokuThula bekungeke kwenzeke. Le trust ilunyanzeliso kuthi ukuba siqhubeke siqhubeke nendlela esiye sayithabatha yokuhlengahlengisa nokuguqula iQela. Sizimisele ukomeleza ngakumbi iphepha lethu lomncono, ukwandisa inzuzo yethu kwaye sivelise imbuyekezo eyinkunzi enomtsalane. Usukelo lwethu lwezemali olupapashwe ngoJuni lubonisa oku ngokucacileyo. Siqinisekile ukuba siza kudala ixabiso elizinzileyo kubaninizabelo bethu. ”
NgoJuni ka-2020, abaninizabelo be Deutsche Lufthansa AG yavula indlela yamanyathelo okuZinzisa kweNgxowa-mali yoZinziso loQoqosho (ESF) yeFederal Republic of Germany. Iphakethe likarhulumente waseJamani ekuqaleni libonelele ngamanyathelo kunye nemali-mboleko efikelela kwi-9 yeebhiliyoni zee-euro, apho inkampani ithe yatsala i-euro ezibhiliyoni ezi-3.8. Oku kuquka malunga ne-306 yezigidi zee-euro apho i-ESF yakha izabelo zayo kwiDeutsche Lufthansa AG.
Ukuhlaziya amatyala asele ekhona kunye neepakethe zokuzinziswa kukarhulumente, inkampani ithathe amatyala ahlukeneyo kunye namanyathelo okuxhasa ngemali ukulingana ukusukela ekwindla ka-2020. Ngokwenza oko, yaxhamla kwintembeko ekhulayo yeemalike zezemali kwixesha elizayo leemalike zezemali. Iqela leLufthansa.
NgoNovemba ka-2020, inkampani yenze "ukubuya" kwiimarike zenkunzi kunye nebhondi eguqulwayo kunye nenani elipheleleyo le-600 yezigidi ze-euro kunye nebhondi ye-1 yebhiliyoni ye-euro. NgoFebruwari 2021, iDeutsche Lufthansa AG iphinde yakhupha ngempumelelo ibhondi ye-1.6 yeebhiliyoni zeeyuro. Okunye ukufakwa kwebhondi kulandele ngoJulayi 2021 kwisixa-mali sebhiliyoni e-euro. Ngo-Okthobha ka-1, inkampani igqibe ngempumelelo ukonyuka kwenkunzi. Ingeniso epheleleyo evela ekunyusweni kwenkunzi ifikelele kwi-2021 yeebhiliyoni zee-euro. Ekugqibeleni, nge-2.2 kaNovemba 9, i Iqela leLufthansa yaphinda yasebenza ngempumelelo kwimalike yezemali kwaye yakhupha ibhondi kwisixa-mali se-euro eyi-1.5 yebhiliyoni.